नेपाली मन भारतीय अतिक्रमणबाट दुःखी भएको छ: शारदा क्षेत्री – Online Annapurna
नेपाली मन भारतीय अतिक्रमणबाट दुःखी भएको छ: शारदा क्षेत्री
१ मंसिर २०७६, आईतवार ११:११ November 17, 2019 1135 Views
“साहित्य, राजनीति र समाज सेवा मेरो रुचिको विषय हो”
आरजू विष्ट सल्यानी/ मंसिर ०१, पोखरा
कुनै केहि अवरोध र वाधाहरुले नछेक्ने, नरोक्ने बरु मानिसलाई क्रियाशिल बनाउने भनेको सोंच, बिचार र सृजनाले नै रहेछ । न मानिसको सृजनात्मक पक्षलाई उमेरले छेक्न सक्छ न त आरिसमा जल्नेहरुबाट रोकिन सक्छ, त्यसको सट्टामा मानिस झन् सृजनात्मक क्षमता र मनका उकुसमुकुस भावनाहरुले समाजमा प्रतिस्थापन हुन, स्थापित हुन र पहिचान बनाउन मद्यत पुग्दो रहेछ । यस्तै सृजनाको फाँटमा चलायमान रहनु भएकि २००९ सालमा काठमाडौंमा जन्मिनु भएकि, पारिवारीक बसाई चीतवन, हाल न्यूयोर्क, अमेरीका निवासी कवि शारदा क्षेत्री एउटा नाम हो ।
केहि वर्ष अघि अकल्पनिय सवारी दुर्घटनामा परेर शारीरिक अशक्तताका बावजुद नेपाली साहित्य लेखन, समाजिक सेवा तथा नेपाली राजनीतिप्रति रुची राख्दै आउनु भएको छ । उसो त उहाँ २०३६ सालदेखि नेपाली कांग्रेससंग आवद्धता जनाउँदै आउनु भएको छ । हाल उहाँ अमेरिकामा नेपाली कांग्रेस निकट नेपाली जनसम्पर्क समितिमा रहेर र एक सामाजिक कार्यकर्ताको रुपमा काम गर्दै आउनु भएको छ ।
नेपाली साहित्यका अग्रज महान साहित्यकार, समकालिन साहित्यकार, अनुज पुस्ताका साहित्यकारका रचनाहरुसंग मस्तिष्क मन्थन गर्दै आउनु भएकि कवि क्षेत्रीले अन्नपूर्णअनलाईन डट कम संग समपर्कमा आउँदा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको एउटा पंक्तिलाई सम्झनु भएको छ :
“नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे…” राष्ट्रकवि माधव घिमिरे
हो नेपाली हामी कहाँ रहौंला र नेपालै नरहे, सत्य यहि नै हो । उहाँ जस्तै वो प्रवासमा बसेका छन् वा नेपालमा रहेको नेपाली जोसुकैको मन भारतीय सीमा अतिक्रमणबाट दुःखी भएको छ । यस्को समाधान कुटनीतिक तवरले दुबै देशका सरकारले नमिलाई सुखै छैन । र नेपालको सीमा, भूमि मिचिएको कुनैपनि नेपालीलाई सह्य पनि हुँदैन ।
अहिले सुदूरपश्चिम नेपालमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई छिमेकी राष्ट्र भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्शामा भारततर्फ रहेको देखाएको छ । नेपाल तथा विश्वभरका नेपालीले भारतीय बिस्तारवादी नीतिको विरोध जनाईरहेको बेलामा कवि शारदा क्षेत्रीले आफ्नो मन मस्तिष्कबाट उव्जिएका भावहरुलाई सुन्दर बनोटमा पेश गर्नुभएको छ र नेता तथा सरकार के गरिरहेका छन् ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ ।
“राष्ट्रियता हाम्रो कसरी रहला र राष्ट्र नै नरहे….” शारदा क्षेत्री
देश छ र हामीले हाम्रो राष्ट्रियताको कुरा गर्छौं । राष्ट्र नै रहेन भने हाम्रो राष्ट्रियता कसरी रहला राष्ट्र र होईन ? यो तीन करोड नेपालीको चिन्ताको विषय हो । हामीले नै हो देशलाई बनाउने अनि बचाउने पनि र हामी नै कस्सिनु पर्छ नेपाललाई जोगाउन ।
बचाऊन देश मिलेर सबै, अगाडि बढ्नु छ
हाम्रो नेपाल, नेपालीको शिर उच्च बनाउनु छ ।
जाग हे जाग वीर गोरखाली जाग अघि बड
आमाका सन्तती तिमी कहिल्यै पछाडी नसर ।
विश्वमा कृति राख्यौ भईकन वीर गोरखालीको
चारैतिर सिमाना घेरि नेपाल बचाऊ नेपालिको ।
कता गए नेताहरु ? कतातिर भूलेको छ सरकार
खोजि खोजि ल्याउन समिप कठालोमा समायर ।
गरेका हुन कि कुर्सिको लडाई, छैन देशको चिन्ता
भोट माग्न आउँदाखेरि होसियार बनिदेउन जनता ।
बार्ता गरौं, वार्ताबाट समस्याको समाधान निकालौं
अझैकुरा नसुने उनिहरुलाई घुमाऊ कालो मोसो दलेर ।
सबै नेताहरु र मन्त्रिहरु ठूलाठूला भाÞषण मात्र गर्ने
देश बचाऊन सोझा जनता लडाई गरेर मर्नुपर्ने ?
लाखलाख आर्मि पुलिस केको लागि पालेर राख्छौ
कमिसन घुस खाई शान्ति सेनामा नेपाली पठाउँछौ ।
कता गए, कता हराए सबै दलका नेताहरु ?
नेपालमै छन् कि भिख माग्न पुगे भारत खुरुखुरु ।
किन चुप छन्, जाँदैनन् किन सिमाना हेर्न बार्ता गर्न
भोट दिएर चुनेर पठाएको तिमीलाई हो के भाषण गर्न ?
कालापानि लिपु लेक भारतले आफ्नो बनाई सक्यो
नेपालको सिमा मिचिमिचि पिल्लरहरु ति सारी सक्यो ।
के यसरी नै हो चुपचाप बस्ने ? केहि त गर सरकार
भारतको गुलाम बन्ने के तिम्रो सोंचबिचार कुनै छ र ?
देश दुखेको बेला मन पनि असाध्यै दुख्छ. र मन दुखेको बेलामा लेख्न बाध्य पनि बनाउँछ मान्छेलाई ।
यो स्वार्थि संसारमा बाँच्न पनि गाह्रो रैछ
भित्रि मनलाई दुखाई हाँस्न पनि गाह्रो रैछ,
फूलको जवाफ पत्थरले दिन्छन् मान्छेहरु
नबुझ्नेसंग मित्रता गाँस्न पनि गाह्रो रैछ ।
(मुक्तक ) २
पलपल सम्झिने मन नहुनि भए
पिर पर्दा यि आँखाहरु नरुनि भए,
कस्तो हुन्थ्यो होला खै यो जिन्दगी ?
बिगतले झस्काई मुटु नदुख्नि भए ।
बिगतलाई संम्झिएर आँखा कति पगाले !
क्षितिज पारि टोलाउँदै आँशुलाई खसाले !!
अरुलाई भनौ भनेपनि सुनिदिने को छ र !
आफ्नै मनभित्र पीडाहरु कतिकति संगाले !!
अतितले जति घोचेपनि सहनु पर्ने रहेछ !
रीत्तो छु, यो मुटु ढुकढुकिमा व्यर्थै अंगाले !!
दुःखी मनलाई जितेर अगाडी बढ्छु भन्दा !
चर्रचर्र चर्रचर्र चर्किने छाति कति सम्हाले !!
जय देश, जय नेपाल !!!
न्यूयोर्क, अमेरीका ।facebook.com/sharada.kshetri